Tattoo-yada Qurxoon - Fikradaha Tattoo-ka ee Xaqiiqda ah | Tattoo
Tattoos qurux badan oo leh dhameystir macquul ah
Sababtoo ah adduunka tattoosku wuu kala duwanaan karaa. Wanaagsan tan sidan tan tanina waxay tusineysaa in male iyo dhadhanka marwalba si dhow isugu xiran yihiin. Maanta waxaan idin tusaynaa xoogaa Tattoos qurux badan in ay leeyihiin saldhig weyn oo waaqica. Dhamaan mid shaqo farshaxan maqaarkaaga ah!
Haddii mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah tattoos uu horeyba u ahaa, shaki la'aan xitaa in ka badan kiiskan. Tafaasiisha ugu cajaa'ibka badan ayaa isu soo uruurisa taas oo kaa dhigi doonta inaad u maleyso inaysan runti ahayn a Sawir gacmeed. Iska hubi oo soo ogow waxa indhahaagu dhab ahaan kuu sii daayeen inaad aragto.
1 Tattoos qurux badan oo macquul ah
1.1 Tattoo wajiga
1.2 Tattoo xoolaha
1.3 Meelaha lagu sawiro
1.4 Tattoo biomechanical
1.5 Tattoos leh walxo
Tattoos qurux badan oo macquul ah
Waxaan jeclaan naqshadaha macquul ah iyo Tattoo 3d. Saameyn gaar ah oo siin doonta mid kasta oo ka mid ah sawirada aan dooranay nolol ka badan inta aan malayn karno marka hore. Haddii aad raadineyso fikrado qaar, halkan waad ku haysaa.
Tattoos qurxoon oo macquul ah gudahood, waa inaan muujinaa tattoos wajiga. Shaki la'aan, waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican. Halkan waxaad sidoo kale dooran kartaa naqshadaha ugu kala duwan. Dad badan ayaa doorta inay xirtaan waji aan la aqoon iyo waxyaalo qurxiyo oo kala duwan. Laakiin dad badan oo kale waxay doorbidaan inay keenaan heesaha ay jecel yihiin ama eheladooda. Dabcan, hubi inaad isaga la joogto farshaxan tattoo ku habboon oo loogu talagalay naqshad gaar ah. Ma noqon doonto markii ugu horreysay ee aan aragno waxoogaa tattoos ah wax kasta laakiin waa macquul!
Mid kale oo ka mid ah fikradaha waaweyn ee aan ku dhex leenahay astaamaha qurxoon waa xaragada xayawaanka. Dhexdooda, waa ku filan tahay inaan bilowno raadinta dhammaan noocyada cayayaanka inay soo muuqdaan. Xaaladdan oo kale, anigu ma aanan dooran caaro, laakiin abees ayaa dhex gasha maqaarka iyo dabcan, faras qurux badan. Labada xaaladoodba, xaqiiqadu way ka badan tahay tan hadda jirta asal ahaana sidoo kale waa lagu soo daray iyaga.
Meelaha lagu sawiro
Muuqaalada ama meelaha laga soo qaaday filimada sidoo kale waxay noqon karaan halyeeyga tattoo wanaagsan. Taasi waa sababta dad badani u soo jeestaan tattoos leh goobo gaar ah ama si loo xusuusiyo faahfaahinta qaarkood. Haddii ay jirto magaalo aad booqatay oo aadan ka daalin sameynta, waxaa laga yaabaa inay tahay waqti fiican in lagu sawiro maqaarkaaga. Sidoo kale tattoos ka wakiil ah shaqooyinka farshaxanka ayaa baahi weyn loo qabaa, ilaa iyo inta ay leeyihiin xaqiiqda weyn.
Dabcan, haddii aan ka hadalno saameynta dhabta ah ee tattoos, waa wax aan macquul aheyn in aan xuso tattoos biomechanical. Dariiq ay makiinado u galaan jidhkeena isla markaana aan ugu muujino si xeeladeysan. Saamaynta maqaarka ee dooxay waa mid ka mid ah kuwa ugu khaaska ah naqshadaha sidan oo kale ah. Dhabarka iyo waliba gacmaha ama gacmuhu waa meelaha aasaasiga ah ee lagu xidho tattoo qaabkan. Dabcan, lugaha ama cagaha gadaal lagama tagi doono.
Tattoos leh walxo
Maaddaama ay jiraan mawduucyo badan oo aan ku hayno qashinkeenna, had iyo jeer ma fududa in la doorto tattoo gaar ah. Hadda waxaan fahamnay dadka qaada wax ka badan hal ama laba! Marwalba waad dooran kartaa walxaha, oo waliba u baahan astaan ​​weyn. Miyaad jeceshahay muusikada? Markaa waxba kama jiraan a gitaar ama qoraal muusig ah. Haddii aad jeceshahay xiriirka ka dhexeeya samada iyo dhulka, ka dib dooro albaab leh qaab sir ah.
Ikhtiyaar kasta oo la doorto, had iyo jeer waa lagama maarmaan in la helo xaqiiqda weyn, sida kuwa aan maanta kuu soo bandhigno. Hab loo xidho midka ugu dhabta ah, oo lagu rakibo macno leh had iyo jeerna maqaarkeenna. Maxaan kaloo weydiisan karnaa?
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Tattoos » Body Art » Tattoos qurux badan oo leh dhameystir macquul ah
Tattoo Hawaii, taariikhdooda iyo astaamahooda waaweyn
Isku-dubaridka 'Glyph tattoos': ururinta iyo awoodda ku jirta maqaarkaaga